Ny jiro taratasy miova loko dia manazava ny teny tianao indrindra amin'ny fotoana manokana, hetsika, Krismasy, fety, fialantsasatra, fampisehoana na haingon-trano. Izy io koa dia fanomezana tsara ho an'ny zanakao, ny namanao ary ny fianakavianao.
Ampamirapirato ny teny tianao indrindra amin'ny fotoana manokana, hetsika na fanaovana haingon-trano.
Taratasy sy jiro tarehintsoratra 27 tarehintsoratra 27, toy ny fitambarana tsy mitongilana ao amin'ny I LOVE U, HOME, MARRY ME, U&M, JOY sns.
Ny jiron'ny diabenay hazavana dia be dia be sy mora entina satria 8,66 santimetatra ny halavany, 1,77 santimetatra ny hateviny, azo ahantona amin'ny rindrina ary handray batterie 2x AA ka tsy dia be loatra izy ireo ary tsy mila ampidirina anaty outlet elektrika.
Jiro haingon-taratra LED lamaody, fiainana jiro LED lava, fampiasana maharitra dia tsy mafana. mahazo ny haingon-trano tsara indrindra vokany
Taratasy LED Backlit ity dia mety tsara amin'ny haingon-trano, dokam-barotra sns.
Ekeo ny fanaingoana, ny atiny, endrika, habe isan-karazany ho an'ny safidinao
Fomba Famaritana tarehintsoratra fantsom-pandehan'ny acrylic jiro eo aloha
Size sy loko Famaranana namboarina OEM & ODM.
Loharanom-pahazavana Sombin'ny tarika LBY tarihin'ny marika (miaraka amin'ny ora fiasana mihoatra ny 50.000)
mpanova Transformator marika meanwell, fampidirana: AC 110-240V Output: DC 12V
Fametrahana 1: sary fametrahana 1 ary visy.
Accessories Transformer, sary fametrahana ary visy.
Miavaka amin'ny kinova fotsy mafana mahazatra, ity hazavana litera nohavaozina ity dia afaka manova loko 16 izay manome safidy safidy loko hafa. Makà iray hahatonga ny fankalazanao ho maro loko kokoa.
Fanaraha-maso lavitra indrindra
Miaraka amin'ny kinova taloha an'ny remote, azonao atao ihany ny mifehy ny ora / ny ora ary ny fotoana, fa amin'ny alalànay lavitra vaovao dia azonao atao ny misafidy ny lokon'ny hazavana tadiavinao miaraka amina maodelin'ny jiro 4 toy ny FADE, JUMP, ASYN FADE, ASYN JUMP ho an'ny safidy . Ny zavatra mahagaga indrindra dia ny ahafahanao mifehy ny hafainganam-pandehan'ny flashing.
Mandehana maka jiro hanaingoana ny tontolonao
Ny litera sy ny & abidia 26 abidy dia manome fahafaha-manao tsy manam-petra hamoronana hafatra. Manorata anarana na andian-teny miaraka amin'ireto litera abidia manazava be toa ny "BAR" ao anaty fitoeram-boalobokao ireto, "FITIAVANA" amin'ny fampakaram-bady na ampidiro am-tsoratra ny efitranon'ny ankizy.
【Jiro abidy haingo】 hazavana litera fanovana loko manazava ny teny tianao indrindra amin'ny fotoana manokana, hetsika, Krismasy, fety, fialantsasatra, fampisehoana na haingon-trano. Izy io koa dia fanomezana tsara ho an'ny zanakao, ny namanao ary ny fianakavianao.